Chọtara 337 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 Κορινθίους, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Nꞌisi ụtụtụ echi ya, ndị isi nchụaja na ndị okenye ndị Juu zukọtara. Ha chepụtara ụzọ kachasị mma ha nwere ike isi kwagide Pailet ka ọ maa Jisọs ikpe ọnwụ.
Mgbe Judas, onye ahụ rara Jisọs nye, nụrụ na a mara Jisọs ikpe ọnwụ, o chigharịrị weghachikwara ndị isi nchụaja na ndị okenye ego ahụ ha kwụrụ ya.
Ọ gwara ha sị, “Emehiela m, nꞌihi na araara m nwoke na-emeghị ihe ọjọ ọ bụla nye nꞌaka ọnwụ.” Ma ha zara ya sị, “Nke ahụ agbasaghị anyị, ọ bụ ihe dịrị gị.”
Ọtụtụ ili meghere. Ọtụtụ ụmụ Chineke, ndị nwụrụ anwụ, ka e mere ka ha si nꞌọnwụ bile.
Mgbe Jisọs sitere nꞌọnwụ bile, ndị ahụ sitere nꞌọnwụ bilie hapụrụ ili ha bata Jerusalem. Ọtụtụ ndị mmadụ hụkwara ha.
Ha gwara Pailet sị, “Nna anyị ukwu, anyị na-echeta na mgbe onye ụgha ahụ dị ndụ, ọ sịrị na ya ga-esi nꞌọnwụ bile mgbe ụbọchị atọ gasịrị.
Ya mere, nye iwu ka ndị agha gị chee ili ya nche, ruo mgbe ụbọchị atọ gasịrị. Nke a ga-egbochi ndị na-eso ụzọ ya ịga zuru ahụ ya. Ka ha ghara ịsịkwa na o sitela nꞌọnwụ bilie. Ọ bụrụ na ha agha ụgha dị otu a, ọ ga-ajọrọ anyị njọ mgbe ahụ karịa na mbụ.”
Ọ nọkwaghị nꞌebe a. O sitela nꞌọnwụ bilie, dị ka ọ gwara unu. Bịanụ lee ebe ha nyibere ahụ ya mgbe ha bubatara ya na mbụ.
Ọ dịghị anya mmadụ anọ bịarutere nꞌebe igwe mmadụ ndị a gbakọrọ. Ha bu enyi ha nꞌute, bụ onye akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
Olee nke dị mfe ikwu? Ọ̀ bụ ịgwa nwoke a akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ na a gbagharala ya mmehie ya, ka ọ bụ ịgwa ya ka o bilie chịrị ute ya laa?
Jisọs lere ha anya nꞌiwe. Enweghị ọmiko ha were ya iwe nke ukwuu. Mgbe ahụ ọ gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ okwu sị, “Setipụ aka gị!” Nꞌotu mgbe ahụ nwoke ahụ setipụrụ aka ya. Mgbe ọ na-eme nke a aka ya dizikwara nke ọma.
Ọ rịọsịrị Jisọs arịrịọ ike sị ya, “Biko, ada m nwanyị nọ ugbu a nꞌọnụ ọnwụ bịa ngwangwa ka i metụ ya aka ka ọ dịkwa ndụ.”
Ọ dịghị anya eze Herọd nụrụ akụkọ banyere Jisọs, nꞌihi na nꞌoge a ndị mmadụ nọ ebe nile na-ekwu okwu banyere ọrụ ebube ọ na-arụ. Ụfọdụ mmadụ sịrị, “Jisọs bụ Jọn omee baptizim. O sitela nꞌọnwụ dịrị ndụ ọzọ. Ọ bụ nke a mere o ji arụ ọrụ ịtụnanya ndị a nile ọ na-arụ.”
Ma mgbe Herọd nụrụ ihe banyere Jisọs, ọ sịrị, “Nwoke a ga-abụkwanụ Jọn omee baptizim, onye m bipụrụ isi. O sitela nꞌọnwụ bilie!”
Emesịa, Jisọs bidoro ịgwa ndị na-eso ụzọ ya ihe banyere otu ọ ga-esi hụọ ahụhụ, na otu ndị okenye, na ndị isi nchụaja na ndị ozizi iwu ga-esi jụ ya. Ọ gwara ha ihe banyere otu ha ga-esi gbuo ya, na otu ọ ga-esi site nꞌọnwụ bilie nꞌụbọchị nke atọ.
Mgbe ha si nꞌelu ugwu ahụ na-arịdata, Jisọs gwara ha sị, “Ka ntị ọ bụla hapụ ịnụ ihe banyere ihe a anya unu hụrụ taa, tutuu ruo mgbe m sitere nꞌọnwụ bilie.”
Mmadụ atọ ahụ, Pita, na Jemes na Jọn agwaghị onye ọ bụla ihe ha hụrụ. Ma ha kwurịtara okwu nꞌetiti onwe ha itule ihe Jisọs bu nꞌuche mgbe ọ sị na ọ ga-esi nꞌọnwụ bilie.
nꞌihi na o ji oge ahụ na-ezi ndị na-eso ụzọ ya ihe. Ọ gwara ha sị, “A ga-arara Nwa nke mmadụ nye nꞌaka ndị ga-egbu ya, ha ga-egbukwa ya. Ma mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ọ ga-esite nꞌọnwụ bilie.”
Nꞌisi ụtụtụ echi ya, mgbe ha sitere nꞌakụkụ osisi fiigi ahụ Jisọs bụrụ ọnụ na-agafe, ha hụrụ na osisi a esitela na mgbọrọgwụ ya kpọnwụọ ruo nꞌalaka ya.
Pita chetara okwu ahụ Jisọs kwuru ụnyaahụ, gwa Jisọs okwu sị, “Onye ozizi, lee anya! Osisi fiigi ahụ ị bụrụ ọnụ akpọnwụọla!”
Ma mgbe m si nꞌọnwụ bilie, aga m aga Galili izute unu nꞌebe ahụ.”
Pita kwusiri ike sị, “Ọ dịghị! Ọ bụrụkwa na ihe ọnwụ adapụta aga m eso gị nwụọ. Agaghị m agọnarị gị!” Ndị ọzọ bụ ndị na-eso ụzọ Jisọs kwukwara otu okwu ahụ.
Unu anụla okwu arụ si ya nꞌọnụ pụta! Gịnị bụ mkpebi unu?” Ha nile tiri mkpu sị, “O kwesịrị ọnwụ!”
Ma nwokorọbịa ahụ gwara ha sị, “Unu atụla ụjọ, amaara m na ọ bụ Jisọs onye Nazaret a kpọgidere nꞌobe ka unu na-achọ. Ọ nọkwaghị nꞌebe a, o sitela nꞌọnwụ bilie! Lee ebe e nyibere ya na mbụ.
Meri lara gaa chọpụta ndị na-eso ụzọ Jisọs ka ha nọ nꞌọnọdụ iru uju na ịkwa akwa, gwa ha na Jisọs esitela nꞌọnwụ bilie.
Emesịa, Jisọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya iri na otu ahụ onwe ha, mgbe ha nile nọkọrọ na-eri nri. Ọ baara ha mba nꞌihi enweghị okwukwe ha, na nꞌihi na ha jụrụ ikwenye nꞌihe Meri na ndị ọzọ hụrụ ya gwara ha banyere mbilite nꞌọnwụ ya.
Nꞌoge ahụ, ụfọdụ mmadụ ndị bu otu nwoke akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ nꞌihe ndina ya, bịara gbalịa isite nꞌọnụ ụzọ ụlọ ahụ Jisọs nọ ịbubata enyi ha ahụ nso ebe Jisọs nọ.
Mgbe ahụ Jisọs lere anya gburugburu nꞌiwe sị nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, “Setịpụ aka gị.” Mgbe nwoke ahụ setịpụrụ aka ya, ọ dịkwara ya mma ọzọ.
Na Kapanọm, ọ dị otu ọchịagha ndị Rom nwere otu ohu nwoke ọ hụrụ nꞌanya. Ohu a nọ nꞌọrịa, nꞌọnụ ọnwụ.
Mgbe ahụ Jisọs gara nso metụ igbe ozu ahụ aka. Ndị bu ya kwụsịrị. Jisọs gwara nwoke ahụ nwụrụ anwụ okwu nꞌoke olu sị, “Nwokorọbịa, asị m gị si nꞌọnwụ bilie!”
Emesịa Jisọs gwara ha sị, “Laghachinụ azụ kọọrọ Jọn ihe unu ji anya unu hụrụ na ihe unu ji ntị unu nụrụ. Kọọrọnụ ya na a na-eme ka ndị kpuru isi hụ ụzọ, na ndị ngwụrọ na-agakwa ije, na a na-emekwa ka ndị ekpenta dị ọcha, na ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, na a na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si nꞌọnwụ bilie, na a na-ekwusakwara ndị ogbenye ozi ọma.
Mgbe Herọd onye na-achị Galili nụrụ akụkọ banyere ihe Jisọs na-eme, ihe ọ nụrụ gbagwojuru ya anya, nꞌihi na ụfọdụ mmadụ gwara ya na Jisọs bụ Jọn omee baptizim, na o sitela nꞌọnwụ bilie.
Ndị ọzọ gwara ya na Jisọs bụ Ịlaịja onye bịaghachiri azụ. Ma ọ dịkwa ndị ọzọ gwara ya na Jisọs bụ otu nꞌime ndị amụma ochie ahụ sitere nꞌọnwụ bilie.
Ndị na-eso ụzọ ya zara ya sị, “Ụfọdụ na-asị na ị bụ Jọn omee baptizim, ndị ọzọ sị na ị bụ Ịlaija, ndị ọzọ sị na ị bụ otu nꞌime ndị amụma ochie ahụ si nꞌọnwụ bilie.”
Ọ gwakwara ha sị, “Nwa nke mmadụ ga-ahụ ahụhụ dị ukwuu. Nꞌihi na ndị okenye anyị, na ndị isi nchụaja na ndị ozizi iwu ga-ajụ ya. Ha ga-egbu ya, ma ụbọchị atọ gafee, ọ ga-esite nꞌọnwụ bilie ọzọ.”
Jisọs zara sị, “Ọ dị otu nwoke sitere nꞌobodo Jerusalem na-aga nꞌobodo Jeriko. Mgbe ọ na-aga nꞌụzọ, o zutere ndị ohi na-apụnarị mmadụ ihe nꞌike, ndị napụrụ ya ihe nile o nwere, tie ya ihe, hapụ ya nꞌọnọdụ ọdịndụ ọnwụkamma laa.
Ebe ọ bụ na ndị a enweghị ike ịkwụghachi gị, Chineke ga-agọzi gị, kwụghachikwa gị, dị ka ọ ga-esi kwụghachi gị mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-esi nꞌọnwụ bilie.”
Ha ga-eti m ihe, gbuokwa m. Ma nꞌụbọchị nke atọ, aga m esite nꞌọnwụ bilie ọzọ.”
Mgbe oge nta gasịrị, ụfọdụ ndị si nꞌotu ndị Sadusii bịakwutere Jisọs. Ndị a bụ ndị ahụ na-asị na ndị nwụrụ anwụ agaghị ebilitekwa nꞌọnwụ ọzọ.
Mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-esi nꞌọnwụ bilie, onye ka nwanyị a ga-alakwuru dị ka di ya ebe ọ bụ na ụmụnne nwoke asaa ahụ lụrụ ya nꞌụwa a?”
Ma ndị ahụ Chineke gụrụ dị ka ndị tozuru etozu inwe ndụ ebighị ebi agaghị alụ di na nwụnye mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-esi nꞌọnwụ bilie,
Herọd nꞌonwe ya kwa achọpụtaghị ihe ọjọọ ọ bụla nwoke a mere. Ọ bụ nꞌihi nke a ka o jiri zighachiri m ya. Ahụghị m ihe ọjọọ ọ bụla o mere nke pụrụ iwetara ya amamikpe ọnwụ.
Pailet gwakwara ha okwu nke ugbo atọ sị, “Gịnị mere unu ji chọọ ka nwoke a nwụọ? Gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? Achọpụtaghị m ihe ọjọọ o mere nke ga-ewetara ya ọnwụ. Aga m apịa ya ihe hapụ ya ka ọ laa.”
Ọ mara Jisọs ikpe ọnwụ dị ka ha chọrọ.
Ọ gwara unu na a ga-arara ya nye nꞌaka ndị mmehie ndị ga-akpọgide ya nꞌobe, na ya ga-esikwa nꞌọnwụ bilie ọzọ nꞌụbọchị nke atọ ya.”
Ma ndị isi nchụaja anyị na ndị ọchịchị anyị nyefere ya nꞌaka ndị Rom, ka ha maa ya ikpe ọnwụ, kpọgbuokwa ya nꞌobe.
ndị gwara ha okwu sị, “Onyenwe anyị esitela nꞌọnwụ bilie nꞌezie, o gosila Saimọn onwe ya!”
Ma mgbe ụbọchị ncheta oriri Ngabiga na-abịaru nso, (mmemme a bụ nke ndị Juu na-eji echeta ụbọchị Chineke napụtara ha nꞌaka ọnwụ nꞌala Ijipti), Jisọs gara Jerusalem.
nụrụ na Jisọs esila Judia laghachi Galili. Nwoke a mere ngwangwa gaa Kena. Nꞌebe ahụ ka ọ hụrụ Jisọs rịọ ya ka ọ bịaruo Kapanọm gwọọ nwa ya nwoke nke nọ nꞌọnụ ọnwụ.
Igwe ndị ọrịa dina nꞌakụkụ ọdọ mmiri a. Ụfọdụ nꞌime ha bụ ndị ngwụrọ. Ụfọdụ bụ ndị isi. Ndị ọzọ bụ ndị akụkụ ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ. Ha nile nọ na-eche ka mmiri ahụ mee mkpọtụ.
Dị ka Nna pụrụ ime ka mmadụ si nꞌọnwụ bilie, otu a ka Ọkpara Nna pụrụ ịkpọlitekwa onye ọ bụla nwụrụ anwụ ọ chọrọ site nꞌọnwụ.
Nꞌihi na nke a bụ uche Chineke. Onye ọ bụla hụrụ Ọkpara ya, kwerekwa na ya, ga-enwe ndụ ebighị ebi. Aga m eme ka o site nꞌọnwụ bilite nꞌụbọchị ikpeazụ ahụ!”
Jisọs sịrị ha, “Unu atamụla nꞌime onwe unu. Nꞌihi na mmadụ ọ bụla enweghị ike ịbịakwute m karịakwa ma Nna m onye zitere m, mere ka ọ bịakwute m. Nꞌụbọchị ikpeazụ ahụ, aga m emekwa ka ndị ọ bụla bịakwutere m si nꞌọnwụ bilie.
Ụmụ nwanne nwanyị abụọ ndị a zipụrụ ozi ngwangwa zigara Jisọs sị ya, “Onyenwe anyị, enyi ọma gị nọ nꞌọnụ ọnwụ.”
Mgbe Jisọs nụrụ ya, ọ sịrị, “Ọrịa na-arịa ya abụghị nke ma-eweta ọnwụ, kama ọ bụ ọrịa a ga-esi na ya nye Chineke otuto. A ga-esitekwa nꞌime ya nye mụ onwe m bụ Ọkpara Chineke otuto.”
Mata sịrị ya, “Amaara m na a ga-eme ka o bilie ọzọ mgbe a ga-emekwa ka ndị ọzọ bilie nꞌụbọchị mbilite nꞌọnwụ ikpeazụ ahụ.”
Ụbọchị isii tupuu e mee mmemme Ngabiga, Jisọs gara Betani. Betani bụ obodo Lazarọs, nwoke ahụ Jisọs mere ka o site nꞌọnwụ bilie.
Ọtụtụ ndị Juu nụrụ na Jisọs nọ nꞌebe ahụ. Ha bịara ịhụ ya. Ha bịakwara ịhụ Lazarọs, onye Jisọs mere ka o si nꞌọnwụ bilie.
Ndị nọ mgbe Jisọs mere ka Lazarọs si nꞌọnwụ bilie, gwakwara ndị ọzọ banyere ya.
Jisọs kwuru nke a igosi ụdị ọnwụ nke ọ ga-anwụ.
Jọn nꞌonwe ya banyekwara hụ ihe ndị a nile, kwerekwa na Jisọs esitela nꞌọnwụ bilie nꞌezie.
Tutuu ruo mgbe ahụ, Jọn aghọtaghị na akwụkwọ nsọ kwuru na Jisọs ga-esi nꞌọnwụ bilie ọzọ. Ọ bụ ugbu a ka ha matara.
Mgbe ndị ọzọ gwara ya na ha ahụla Jisọs, o kweghị. Ọ sịrị, “Ọ bụ nanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntu kpọpuru ya aka. Ọ bụ nanị mgbe m tinyere aka m nꞌapa ntu ndị a, ọ bụkwa nanị mgbe m tinyere aka m nꞌakụkụ ya ebe a mara ya ùbe, ka m ga-ekwere na o sitela nꞌọnwụ bilie.”
Nke a bụ ugboro atọ Jisọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya onwe ya malite nꞌoge o si nꞌọnwụ bilie.
Jisọs kwuru nke a igosi ụdị ọnwụ Pita gaanwụ nꞌihi inye Chineke otuto. Mgbe ahụ, Jisọs sịrị Pita, “Soro m.”
ỌLU OZI 1:3
O gosiri ha onwe ya mgbe o si nꞌọnwụ bilie. Ihe ruru iri ụbọchị anọ site na mgbe a kpọgburu ya, ha hụrụ ya na ndụ site nꞌoge ruo nꞌoge. Nꞌụzọ doro anya, o gosiri ha na ọ bụ ya onwe ya ka ha na-ahụ. Nꞌoge a ọ gwara ha okwu banyere alaeze Chineke.
ỌLU OZI 2:24
Ma Chineke emeela ka ọ dịkwa ndụ ọzọ! Chineke tọpụrụ ya site nꞌagbụ nke ọnwụ, nꞌihi na ọ bụ ihe rara ahụ na ọnwụ ga-emeri ya.
ỌLU OZI 2:32
Ọ bụ Jisọs a, nke Devidi buru amụma banyere ya, ka Chineke kpọlitere site nꞌọnwụ! Anyị nile bụkwa ndị akaebe mbilite nꞌọnwụ ya.
ỌLU OZI 3:15
Ma unu gburu Jisọs bụ Onyenwe anyị na Onye na-enye ndụ. Ma Chineke akpọlitela ya site nꞌọnwụ. Anyị na-gbakwa ama na o biliri nꞌọnwụ nꞌezie!
ỌLU OZI 3:26
Ọ bụ unu ka Chineke buru ụzọ zitere Okpara ya Jisọs ka ọ gọzie, mgbe o sitere nꞌọnwụ kpọlite ya. Ka o mee ka onye ọ bụla site na mmehie ya tụgharịa.”
ỌLU OZI 4:2
Ha were iwe nꞌihi na Pita na Jọn na-ezi ndị mmadụ ihe. Ha na-ezi ha na ndị nwụrụ anwụ ga-ebilie ọzọ. Ha ji mbilite nꞌọnwụ Jisọs na-ama atụ.
ỌLU OZI 4:10
aga m agwa unu. Ka ụmụ Izirel nile matakwa! A gwọrọ nwoke a guzo nꞌebe a site nꞌike Jisọs Kraịst onye Nazaret. Ọ bụkwa Jisọs ahụ unu kpọgidere nꞌobe, onye Chineke kpọlitere site nꞌọnwụ. Ọ bụ site nꞌike Jisọs Kraịst ka nwoke a ji guzo nꞌihu unu, dị ka onye ahụ zuru oke.
Ndị ozi Kraịst gara nꞌihu na-agba ama banyere mbilite nꞌọnwụ Onyenwe anyị Jisọs site nꞌike nile. Ngọzị Chineke dịnyeere ha.
ỌLU OZI 5:28
“Ọ bụ na m adọghị unu aka na ntị sị unu kwụsị izi onye ọ bụla ihe ọ bụla banyere aha a? Lee ihe unu mere ugbu a! Ozizi unu ejula Jerusalem! Unu chọkwara ka ndị mmadụ taa anyị ụta nꞌihi ọnwụ nwoke a!”
ỌLU OZI 9:33
Nꞌebe ahụ ọ hụrụ otu nwoke aha ya bụ Ainias. Nwoke a anọọla nꞌute ọrịa afọ asatọ. Ọ bụ onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
ỌLU OZI 10:40
Ma Chineke mere ka o si nꞌọnwụ bilite mgbe ụbọchị atọ gasịrị. E mekwara ka ọtụtụ mmadụ hụ ya anya.
ỌLU OZI 10:41
Kama ọ bụghị mmadụ nile hụrụ ya. Ọ bụ anyị ndị Chineke họpụtara hụrụ ya. Anyị sokwa ya rikọọ nri, sorokwa ya ṅụkọọkwa ihe ọṅụṅụ mgbe o si nꞌọnwụ bilie.
ỌLU OZI 13:28
Ọ bụ ezie na ha achọtaghị ihe kwesịrị ọnwụ nꞌime ya. Ma ha rịọrọ Pailet ka o nye ike ka e gbuo ya.
ỌLU OZI 13:29
Ma mgbe ha mezusịrị ihe nile ndị amụma kwuru banyere ọnwụ ya, ha budatara ya site nꞌelu obe lie ya.
ỌLU OZI 13:30
Ma Chineke mere ka o si nꞌọnwụ bilie ọzọ!
ỌLU OZI 13:32
“Ugbu a mụ onwe m na Banabas bịara nꞌetiti unu iwetara unu ozi ọma a. Nꞌihi na Chineke emezuola nkwa ahụ o kwere nna nna anyị ha nꞌọgbọ a. Nꞌihi na Chineke mere ka Jisọs si nꞌọnwụ bilie.
“Chineke kwererị nkwa ime ka Jisọs site nꞌọnwụ bilie. Ọ gaghị anwụkwa ọzọ. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ na-agwa anyị mgbe e kwuru nꞌime ya sị, ‘Aga m emezuru gị nkwa ahụ nile m kwere Devidi.’
ỌLU OZI 13:37
Kama ihe nile ndị a na-ekwu ihe banyere onye ahụ Chineke mere ka o site nꞌọnwụ bilite. Onye anụ ahụ ya na-erekwaghị ure.
ỌLU OZI 17:18
O sokwaara ndị ọkachamara obodo ahụ, ndị a na-akpọ ndị Epikuri na ndị Stoik kwurita okwu. Kama ha enweghị afọ ojuju mgbe Pọl gwara ha ihe banyere Jisọs na mbilite nꞌọnwụ ya. Mgbe ha nụrụ ya ụfọdụ sịrị, “Nwoke a na-arọ nrọ.” Ndị ọzọ sịkwa, “Ọ na-ewebata ozizi ọhụrụ dị iche.”
Nꞌihi na o debela otu ụbọchị mgbe ọ ga-ekpe ụwa nile ikpe nꞌụzọ ezi omume. Nke a bụ site nꞌaka Onye ahụ ọ họpụtara. O mekwara ka okwu a guzosie ike, mgbe o mere ka Onye ahụ si nꞌọnwụ bilie.”
ỌLU OZI 17:32
Mgbe ha nụrụ ozizi Pọl banyere mbilite nꞌọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, ha chịrị ya ọchị. Ma ụfọdụ nꞌime ha sịrị, “Nꞌoge ọzọ anyị ga-achọ ịnụ okwu ndị a.”
ỌLU OZI 22:4
Akpagburu m ndị nile na-eso ụzọ ọhụrụ a, na-etinye ha nꞌaka ọnwụ. Ejidere m ndị ikom na ndị inyom ha tụbakwa ha nụlọ mkpọrọ.
ỌLU OZI 23:6
Mgbe Pọl ghọtara na ndị bịara nzukọ ahụ dị ụzọ mmadụ abụọ, ndị Sadusii nꞌotu ụzọ, ndị Farisii nꞌụzọ nke ọzọ, o tiri mkpu sị, “Ụmụnna m, abụ m onye Farisii. Nna m bụkwa onye Farisii. A na-ekpe m ikpe taa nꞌihi okwukwe m nwere na mbilite nꞌọnwụ dị.”
ỌLU OZI 24:15
Ma enwere m olileanya dị ka ha onwe ha nwekwara na mbilite nꞌọnwụ nke ndị ezi omume na nke ndị ajọ omume ga-adị.
ỌLU OZI 25:24
Mgbe ahụ ka Festọs kwuru okwu sị, “Eze Agripa na ndị nile soro ya nọkọọ. Nke a bụ nwoke ahụ ndị Juu bi nꞌobodo a na ndị Juu bi na Jerusalem na-achọsi ọnwụ ya ike.
ỌLU OZI 26:8
“Gịnị mere unu, ndị Juu, jiri na-eche na ọ rara Chineke ahụ ime ka mmadụ site nꞌọnwụ bilie ọzọ?
ỌLU OZI 26:10
Etinyere m ọtụtụ ndị na-eso ụzọ a bi na Jerusalem nꞌụlọ mkpọrọ, site nꞌike m natara nꞌaka ndị isi nchụaja. Mgbe a mara ndị ha ikpe ọnwụ, ana m akwagide ka e gbuo ha.
ỌLU OZI 26:31
Mgbe ha gbarịtara izu banyere Pọl nꞌetiti onwe ha, ha kwekọrịtara sị, “Nwoke a ekwesịghị ọnwụ ma ọ bụ mkpọro.”
ỌLU OZI 27:10
“Ndị nwe m, ahụrụ m na anyị ga-enwe nsogbu ma ọ bụrụ na anyị agaa nꞌihu. Eleghị anya ụgbọ mmiri anyị ga-ekpu, ma ọ bụ ibu nile ga-efu, ma ọ bụ na anyị ga-enwe mmerụ ahụ, ma ọ bụ na ọnwụ ga-adị.”
gwa m sị, ‘Atụla egwu Pọl, nꞌihi na ị ghaghị iguzo nꞌihu Siza. Nke ọzọ kwa Chineke anụla arịrịọ gị, ọ ga-anapụta ndụ ndị a nile gị na ha so site nꞌaka ọnwụ mberede.’
ỌLU OZI 28:18
Ndị ọchịchị Rom lenyere anya nꞌikpe m chọọ ịhapụ m ka m laa. Nꞌihi na ha achọtaghị ihe kwesịrị ịma m ikpe ọnwụ dị ka ndị anyị chọrọ.
E gburu Jisọs nihi mmehie anyị, ma o si nọnwụ bilie ọzọ ịzọpụta anyị site na mmehie anyị, ime ka anyị na Chineke dị na mma, na imejupụta anyị nịdị mma nke Chineke nonwe ya.
Ọ bụrụ na ọ bụ site nꞌọjụjụ a jụrụ ndị Juu ka e si mee ka ụwa na Chineke dịrị na mma, gịnị ga-eme mgbe a nabatara ha? Ọ gaghị adị ka ebe ndị nwụrụ anwụ si nꞌọnwụ bilie ọzọ?
2 KỌRINT 3:7
Ma iwu ahụ na-eweta ọnwụ ji ebube dị ukwuu bịa. Ebube ahụ dị nnọọ ukwuu mee ka ụmụ Izirel hapụ inwe ike ilegide Mosisi anya nꞌihu mgbe o si nꞌelu ugwu Sainai rịdata. Ma nꞌezie, ebube ahụ mesịrị bido ịgabiga.
2 KỌRINT 5:15
Kraịst nwụrụ nꞌihi mmadụ nile, ka ndị dị ndụ gharakwa ịdịrị onwe ha ndụ ọzọ, kama ka ha dịrị ndụ ga-atọ Jisọs, onye ahụ nwụrụ nꞌọnọdụ ha ụtọ. Ee, Kraịst ahụ e mekwara ka o si nꞌọnwụ bilie ọzọ.
2 KỌRINT 11:23
Ha na-ekwu na ha bụ ndị na-ejere Kraịst ozi. Ma mụ onwe m ejerrela Kraịst ozi karịa ha nile (amaara m na ụdị okwu a m na-ekwu bụ ụdị okwu onye isi na-adịghị mma na-ekwu). Ma adọgbuola m onwe m nꞌọrụ karịa ha nile. Etinyela m nꞌụlọ mkpọrọ ọtụtụ mgbe nꞌihi ikwusa ozi ọma. Etiela m ihe otiti ọtụtụ mgbe. Mgbe mgbe kwa anọọla m nꞌọnụ ọnwụ.
Ugbu a abụkwaghị m otu nꞌime ndị na-akpọ ọnwụ Kraịst ihe na-enweghị isi. Nꞌihi na a sị na a pụrụ ịzọpụta anyị site nꞌidebe iwu ọ garaghị adị mkpa na Kraịst ga-abịa nwụọ.
Ndị nzuzu a kpọrọ onwe ha ndị Galetia! Ònye bụ dibia ahụ tara ose gbụọ unu nꞌanya, ime ka unu gharakwa ịghọta ihe ọnwụ Kraịst pụtara, dị ka unu si ghọta ya mgbe m kọwaara unu ya na mbụ?
Nꞌihi na nꞌebe m nọ, ịdị ndụ bụ ịnọ nꞌime Kraịst, ịnwụ ọnwụ bụkwa uru nye m.
Ebe ọ bịara nꞌụwa dị ka mmadụ, o wedakwara onwe ya ala, rube isi họrọ ịnwụ ọnwụ jọkarịsịrị njọ, ọnwụ ihere, nke ịbụ onye a kpọgidere nꞌelu obe.
Ọ bụ nꞌihi nke a ka Chineke ji site nꞌọnwụ kpọlite ya, welie ya elu, mee ka ọ nọdụ ugbu a nꞌebe kachasị elu, nyekwa ya aha nke karịrị aha nile ọ bụla elu.
Nꞌezie, ọ fọdụrụ nnọọ ntakịrị ka o site nꞌọrịa ahụ daa nꞌụra ọnwụ. Ma Chineke meere ya ebere. Ọ bụghị ya nanị ka Chineke meere ebere, kama o mekwaara m ebere, nꞌihi na o kweghị ka a tụkwasịrị m mwute gaara abụ nke m, ma a sị na Epafroditọs nwụrụ.
Ugbu a ewezugala m ihe ndị ahụ nile, nꞌihi na achọpụtara m na nke a bụ nanị ụzọ mmadụ si amara Kraịst na ike ahụ e ji kpọlite ya site nꞌọnwụ. Ọ bụkwa nanị site nꞌụzọ a ka e si achọpụta ihe iso Kraịst hụọ ahụhụ, na iso ya nwụkọọ ọnwụ pụtara.
Ya mere, na-ajụghị ihe ọ bụla ọ ga-efu m, aga m abụ otu nꞌime ndị na-ebi ndụ ọhụrụ ahụ nke dịrị ndị e mere ka ha site nꞌọnwụ dịrị ndụ.
Mgbe ọ lọghachiri, ọ ga-eji anụ ahụ dị ebube, nke yiri nke ya, gbanwee anụ ahụ anyị ndị a nke na-anwụ ọnwụ. Ọ bụkwa ike ya ahụ dị ukwuu, nke ọ ga-eji lụgbuo ihe nile dị nꞌụwa, ka ọ ga-eji nye anyị ahụ ọhụrụ ahụ.
Ọ bụ ya bụ isi nke anụ ahụ ahụ bụ chọọchị, nzukọ Kraịst ahụ o bidoro. O sitere nꞌọnwụ bilie bụrụ onyeisi mbụ nꞌetiti ndị nile ga-esi nꞌọnwụ bilie. Nke a mere ka ọ bụrụ onyeisi mbụ nꞌime ihe nile.
Chineke mere nke a site nꞌọnwụ nke Ọkpara ya nwụrụ nꞌelu obe, nke mere ka unu bụrụ ndị enyi ya, ndị a kpọbatara nꞌihu ya, ndị guzokwa nꞌihu ya dị ka ndị dị nsọ na ndị dị ọcha, ndị na-enweghị ntụpọ ọ bụla.
Nꞌihi na mgbe e mere unu baptizim, o gosiri na unu na ya nwụkọrọ, na e likọtakwara unu na ya. Mgbe ahụ kwa ka unu sooro Kraịst si nꞌọnwụ bilie banye na ndụ ọhụrụ, nꞌihi na unu kweere nꞌokwu Chineke dị ukwuu ahụ, onye mere ka Kraịst si nꞌọnwụ bilie.
2 TIMỌTI 2:8
Echefula na Jisọs Kraịst bụ mmadụ. Na a mụrụ ya nꞌezinụlọ eze Devidi. Na ọ bụkwa Chineke nꞌihi na o sitere nꞌọnwụ bilie ọzọ.
Ha ahapụla ịgbaso ụzọ eziokwu ahụ bido na-ekwusa okwu ụgha, naasị na oge mbilite nꞌọnwụ mmadụ nile agafeela. Site nꞌokwu a, ha naemekwa ka ụfọdụ ndị na-ekwere okwu ha bụrụ ndị na-ada mba nꞌokwukwe ha.
Anyị bụ ụmụ Chineke ka e jiri ọbara na anụ ahụ mee. Jisọs gbokwasịrị onwe ya ụdị dị otu a. A mụrụ ya dị ka mmadụ efu. Nꞌihi na ọ bụ nanị dị ka mmadụ ka ọnwụ ya pụrụ ịdị ire. Site nꞌọnwụ ọ nwụrụ, ọ lara ike ajọ onye ahụ bụ ekwensu nꞌiyi. Ekwensu ahụ nwere ike ọnwụ.
Jisọs mere nke a, ka ọ dị mfe ịtọpụ ụmụnna ya site nꞌagbụ. Ha nọ nꞌagbụ nke ụjọ ọnwụ.
Nꞌihi na ebe ya onwe ya hụrụ ahụhụ, ọ pụrụ inyere ndị na-ahụ ahụhụ aka. Ihe banyere ọnwụnwa doro ya anya. Nꞌihi nke a ọ maara ihe bụ nsogbu anyị mgbe anyị dabara nꞌọnwụnwa. Ọ pụkwara inyere anyị aka.
Nꞌihi na anyị nwere onyeisi nchụaja nke nwere ike ịghọta adịghị ike anyị. A nwara Jisọs ọnwụnwa nꞌụzọ nile dị ka a na-anwa anyị taa. Ma o meghị mmehie nꞌụzọ ọ bụla mgbe a nwara ya.
Ndị nchụaja na-anata otu ụzọ nꞌụzọ iri ga-anwụ, mgbe oge ọnwụ ha ruru. Ma akwụkwọ nsọ kwuru na Melikizedeki na-adị ndụ na-aga nꞌihu.
Nꞌoge Mosisi, a na-ama onye ọ bụla mebiri iwu ikpe ọnwụ. Ikpe ọnwụ a na-esite nꞌakaebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ndị ga-ekwupụta na ha hụrụ onye mibiri iwu ahụ oge ọ dara iwu ahụ.
Ọ bụ okwukwe Eberaham nwere nꞌime Chineke mere o ji kwere iwere nwa ya Aizik chụọ aja mgbe Chineke nwara ya ọnwụnwa. Eberaham bụ onye Chineke kwere nkwa ma o kwadoro iji nwa ahụ ọ mụrụ nanị ya chụọra Chineke aja.
Ọ bụkwa okwukwe ka ha jiri nọọ nꞌime ọkụ na-enweghị mmerụ ahụ. Okwukwe ka ọtụtụ jiri gbanarị ọnwụ. Okwukwe ka ndị dara mba jiri dịrị ike, meekwa ka ụmụ ndị iro dị ike gbalaga.
Ọnwụnwa na mkpagbu ndị a na-enyere unu aka ịnwapụta ma okwukwe unu nwere o sikwara ike. A na-anwa okwukwe unu dị ka a ga-asị na ọ bụ ọlaedo e ji ọkụ na-anwapụta. Ọ bụ ezie na ọlaedo bụ ihe pụrụ imebi emebi, ma a ga-eji ọkụ nwaa ya, ịmata nke bụ ezi ọlaedo, na nke na-abụghị ya. Ya mere, ebe ọ bụ na okwukwe unu dị oke ọnụ ahia karịa ọlaedo, a ga-anwakwa unu ịhụ ma ọ ga-eguzosikwa ike. Ọ bụrụ na okwukwe unu eguzo chịm nꞌọnọdụ ọnwụnwa ndị a nile, iguzosi ike unu ga-ewetara unu otuto, ebube na nsọpụrụ nꞌụbọchị ahụ Jisọs ga-alọghachi.
1 PITA 1:24
Nꞌihi na okwu Chineke gwara anyị sị, Ndụ mmadụ nile na-agabiga dị ka ahihia nke na-emesi kpọnwụọ, daa. Ịma mma nile nke mmadụ na ebube ya dịkwa ka okoko osisi nke na-ama mma, ma emesịa, ọ daa nꞌala laa nꞌiyi.
Ma nꞌoge ọ na-emebi Sodọm na Gomora, ọ napụtara Lọt site nꞌaka ọnwụ. Lọt bụ onye ezi omume, onye ndụ ọjọọ ndị obodo ahụ na-ebi wutere nke ukwuu.
1 JỌN 5:6
Onye matakwara na Jisọs bụ Okpara Chineke nꞌihi na Chineke si nꞌeluigwe kwuo na Jisọs bụ Ọkpara ya mgbe e mere Jisọs baptizim. Chineke kwukwara okwu dị otu a nꞌoge ọnwụ Jisọs. Ee, olu esiteghị nꞌeluigwe kwuo okwu nanị nꞌoge e mere Jisọs baptizim, kama o kwuru okwu nꞌoge ọnwụ ya.
1 JỌN 5:17
Ihe ọ bụla na-ezighị ezi mmadụ mere bụ mmehie nꞌihu Chineke. Ma ihe m na-ekwu nꞌebe abụghị ihe banyere ụmụ mmehie ndị mmadụ na-eme. Ana m ekwu ihe banyere mmehie ahụ na-eduba ndị mere ya nꞌọnwụ.
Atụkwala egwu nꞌihi ihe ahụ gaje ịbịakwasị gị. Nꞌihi na ekwensu nꞌonwe ya gaje ime ka a tụba ụfọdụ nꞌime ndị gị nꞌụlọ mkpọrọ ka o jiri ya nwaa gị. A ga-akpagbu gị abalị iri. Ma guzosie ike, ọ bụladị mgbe ọnwụ ga-abịakwasị gị. Emesịa, aga m enye gị okpu nke ndụ ahụ.
Ha bụkuru Nwa atụrụ ahụ abụ ọhụrụ na-asị, “Nanị gị kwesịrị ịnara akwụkwọ ahụ na ịnyakapụ akara dị ya nꞌahụ. Nꞌihi na e gburu gị, ma i sitere nꞌọnwụ gị kpọtara Chineke ndị mmadụ, ndị si nꞌagbụrụ nile, na asụsụ nile, na ndị dị iche iche, na mba nile.
Ha lụgburu ya nꞌagha site nꞌọbara Nwa atụrụ ahụ na site nꞌama ha, nꞌihi na ha ahụghị ndụ ha nꞌanya karịa, kama ha tọgbọrọ ndụ ha kwere ịnwụ ọnwụ nꞌihi ya.
Nke a bụ mbilite nꞌọnwụ nke mbụ. Ndị fọdụrụ nꞌetiti ndị nwụrụ anwụ esoghị bilite nꞌọnwụ nꞌoge a, kama ha ga-anọ nꞌọnọdụ ọnwụ ha tutuu ruo mgbe puku afọ gafesịrị.
Ndị a gọziri agọzi na ndị dị nsọ bụ ndị ahụ ketara oke na mbilite nꞌọnwụ nke mbụ ahụ, nꞌihi na ụjọ ọnwụ nke ugboro abụọ adịghị atụ ha, nꞌihi na ha ga-abụ ndị nchụaja Chineke na nke Kraịst, sorokwa ya chịa achịa puku afọ.